Nchịkọta Ahịa Ahịa 2013 Mobile | Martech Zone
Thursday, January 2, 2014 Wenezdee, Jenụwarị 1, 2014 Douglas Karr
Anyị kwuru banyere mkpịsị aka afọ gara aga? Enweghị m ike ịgwa gị ọtụtụ puku kwuru anyị mere ma gaa n'ihu na-eme. N'agbanyeghị nke ahụ - naanị 25% nke ụlọ ọrụ nwere atụmatụ mkpanaka… ouch. Izi ozi ederede, ekwentị mkpanaaka, ngwa mkpanaka na email mkpanaka bụ ọkọlọtọ maka atụmatụ ahịa ọ bụla. Ọ bụrụ n ’ijeghị ọsọ ọsọ, ị na-efunahụ nnukwu akụkụ nke ndị na-ege ntị chọrọ ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị.
Ọnụ ọgụgụ ndị ahụ na-eju anya - ọtụtụ ụlọ ọrụ kwetara na ha enweghị atụmatụ mkpanaka, na m chere bụ na ndị na-eche na ha nwere atụmatụ mkpanaaka na-akọwahie. Ha na-eche na naanị ịnweta ngwa ma ọ bụ mkpokọta enyi na enyi nwere ike ịnweta atụmatụ. Ọ dabara nke ọma na ụdị ndị amalitere ịmalite ịma ihe dịka imebe ngwa ngwa na HTML5 ngwa weebụ na ngwa ọdịnala, ndị ahịa na-ekenyekwa ego na mgbasa ozi mkpanaka. Neil Bhapkar, Uberflip VP nke ahia.